Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha guddiga xakamaynta qaylo-dhaanta gaaska - Shiinaha
GT-AEC2232a Taxane go'an Ga...
JT-AEC2361a Taxanaha guryaha...
BT-AEC2386 gubasho la qaadan karo...
BT-AEC2688 Multi G oo la qaadan karo
Taxanaha BT-AEC2689 Gacanta lagu hayo...
AEC2302a Nidaamka Xakamaynta Hubinta Gaaska
gudbinta signalka baska, oo lehhab adag oo awood ka-hortagga faragelintaiyo shaqada fiilooyinka kharash-ku-ool ah, rakib ku habboon oo hufan;
U-fiirsashada gaaska-waqtiga-dhabta ah (% LEL/ppm/% VOL) ​​isha la socodka ama interface bandhig wakhtiga doorashada isticmaalaha;
Dejinta bilaashka ah ee qiimaha alaarmiga laba heer ah iyo saddex nooc oo qaylo-dhaan ah (kor u kaca/dhicidda/laba-heer);
Habaynta tooska ah, iyo baafinta tooska ah ee dareemaha gabowga;
Si toos ah ula socoshada fashilka;si sax ah u muujinaya meesha fashilantay iyo nooca;
19" golaha wasiirada heerka 3U panel-ku-saaran qaab-dhismeedka birta oo dhan waxay ka hortagi kartaa faragelinta EMI/RFI.Naqshadeynta kaadhka fur-ku-gudbinta ee madaxbannaan awgeed, kaararka kanaalka ikhtiyaariga ah, kaararka xakamaynta master-ka iyo kaadhadhka korontada ayaa loo isticmaali karaa sida loogu baahan yahay si loo dejiyo nidaamka la socodka gaaska oo leh ilaa 1,000 dhibcood;
Kaarka kantaroolka sayidku waxa lagu gartaa muujinta Shiinaha ee LCD iyo hawlgalka menu-ka dabeecadda.Waxay la socon kartaa feejignaanta nidaamka, qaylo-dhaanta iyo heerka guuldarrada.Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu dejiyo oo lagu baadho cabbirro kala duwan.Waxay dejin kartaa wakhtiga nidaamka, kala duwanaanshaha (% LEL, ppm iyo %VOL), saddex nooc oo alaarmiga, feejignaanta digniinta, erayga sirta ah, iyo oggolaanshaha hawlgalka iyo raadinta ilaa 999 alaarmiga iyo diiwaanada guul darada iyo 100 diiwaanka bilowga/ xidhitaanka;
Afar qaybood oo ah gudbinta wareegga baska, 256 dhibcood oo kormeer ah, nidaam adag oo ka-hortagga faragelinta, maaraynta qaybinta, fiilooyinka kharash-ku-ool ah, rakibid habboon oo hufan;
7 "xalinta sare LCD midabka dhabta ah, oo la mid ah nidaamka hawlgalka daaqadaha, hawlgalka menu ku habboon oo hufan,-waqtiga dhabta ah hal screen soo bandhigay macluumaadka alaarmiga, xogta guuldarada, fiirsashada at detectors, iwm, noocyada gaas oo lagu muujiyey Shiinaha, goob bilaash ah boosaska alaarmiga, weydiinta nidaamka habboon iyo dayactirka;
Dejinta bilaashka ah ee qiimaha qaylo-dhaanta laba heer iyo saddex nooc oo qaylo-dhaan ah (kor u kaca / hoos u dhaca / laba-heer) si loo hagaajiyo shaqada kormeerka nidaamka;
Xusuus xoog leh: diiwaannada taariikhiga ah ee 1,000 diiwaannada guul-darrooyinka ee ugu dambeeyay, 1,000 diiwaannada digniinta ah iyo 100 diiwaanka bilowga/ xidhitaanka, kuwaas oo aan la lumin doonin haddii ay dhacdo koronto;
Gudbinta calaamadda baska, nidaamka adag ee ka-hortagga faragelinta, fiilooyinka kharash-ool ah, rakibid habboon oo hufan;
Isku-xidhka gaaska-waqtiga-dhabta ah (%LEL) isha la socodka ama wakhtiga soo-bandhigidda doorashada isticmaalaha;
Hal badhan oo bilaw u ah hawlgelinta nidaamka fudud oo ku habboon;
Si xor ah u dejinaya qiyamka digniinta ee labada heer ee digniinta ah ee baaxadda buuxda;
AEC2305 Awoodda Yar ee Gaaska Alaarmiga
gudbinta calaamada baska (S1, S2, GND iyo +24V);
Bandhig-fiirin-waqtiga-dhabta ah ee la bedeli karo ama bandhig-wakhti, si loola socdo gaasaska guban kara iyo uumiga;
Laba heer oo qaylo-dhaan ah: Qaylo-dhaan hoose iyo qaylo-dhaan sare, oo leh qaylo-dhaanta la hagaajin karo;
Habaynta calaamadaha digniinta ayaa mudnaanta ka leh habaynta calaamadaha guuldarada;
Xakamaynta Alaarmiga Gaaska AEC2393a
19" caadiga ah ee 3U panel-ku-saaran dhammaan-biraha birta ah waxay leedahay nashqad-gal-simbiyeedka kanaalka kasta;rakibida caadiga ah ee 3U golaha wasiirada waxaa lagu gartaa rakibid sahlan, mugga yar (73% ee AEC2392a) iyo faragelinta anti-EMI/RF;
Kaarka kanaalka ee kanaalka iyo kaadhadhka si gaar ah ayaa loo dejiyey laakiin waxay leeyihiin shaqo muuqaal isku mid ah.Iyada oo leh shaashad weyn oo Shiinaha ah oo LCD ah, kaarka xakamaynta sayidku wuxuu ogaan karaa hawlgalka menu ee Shiinaha iyo sidoo kale si dhakhso ah oo sahlan oo muuqaal ah iyo hawlgal;
Kaararka kanaalka waxay si madax bannaan ugu shaqayn karaan liiska liiska madax bannaan.Sidaa darteed, fashilka kaarka xakamaynta master-ka ama fashilka kaararka kanaalka kale saameyn kuma yeelan doono kormeerka gaaska caadiga ah ee kaararka kanaalka;
Kaadhadhka kanaalka waxay heli karaan calaamadda 4-20mA ama beddelka gelinta calaamadda qiimaha waxayna ku xiran yihiin qalabyo kala duwan, oo ay ku jiraan gaaska gubanaya, gaaska sunta iyo khatarta khatarta ah, qalabka ogsijiinta, qalabka ololka, qiiqa / kulaylka iyo badhamada digniinta gacanta, iwm.;
gudbinta signalada nidaamka saddex-fire;daboolka gidaarka lagu dhejiyo;faragelinta ka-hortagga RFI/EMI;
Alaabtani waxay leedahay muuqaal qurux badan iyo cabbir la qaadi karo, dhowr qalab ayaa lagu dhejin karaa gidaarka;
Kaadhka kantaroolka ee sayidku iyo kaadhadhka kanaalka waxa loo dejiyey si gooni gooni ah oo leh shaqo soo bandhigid isku mid ah.Kaarka kantaroolka sayidku wuxuu leeyahay shaashad weyn oo LCD ah oo Shiinaha ah, waxay noqon kartaa hawlgal menu Shiine ah, soo bandhig oo si dhakhso leh oo fudud u shaqeeya;
Noocyada kala duwan ee wax soo saarka ee kaararka kanaalka ayaa lagu dabaqi karaa isku xirka aaladaha kontoroolka dibadda ee goobta.Adigoo isticmaalaya hab-maamuuska isgaarsiinta MODBUS ee caadiga ah, shaqada isgaarsiinta RS485 waxay la xiriiri kartaa kombuyuutarka martida loo yahay (tusaale DCS/PLC/EDS/RTU, iwm.);
JB-ZX-AEC2252B Solenoid valve isku xirka sanduuqa
Sanduuqa isku xirka valve solenoid waxaa la mid noqon kara qalabka xakamaynta ACTION si loo maareeyo loona xakameeyo noocyada kala duwan ee valves solenoid.
Sanduuqa isku xirka marawaxadaha waxaa lagu barbar dhigi karaa qalabka xakamaynta ACTION si loo maareeyo loona xakameeyo noocyada kala duwan ee valves solenoid.
Dabool-iska-caabbinta qarax: ma jirto dhimbiil, aad u deggan oo la isku halayn karo;
Habka furitaanka Valve: dib u habeynta gacanta, ka fogaanshaha shilka;
Qaabka haynta: si uu ugu shaqeeyo sida uu waalka u furan yahay ama xidhan yahay (sida xaalad laba xasiloon);
Xawaaraha xiritaanka: ka jar sahayda gaaska 1s gudahood;
Xir haddii ay dhacdo gariir xoog leh;valve si toos ah ayuu u xirmi karaa haddii ay dhacdo rabshad rabshado ah;
Cadaadis madax-bannaan oo sii daaya: haddii ay dhacdo kala duwanaansho weyn oo cadaadis ah xagga hore iyo gadaalba, tuubada waa la furi karaa ka dib marka cadaadiska cadaadiska la furo.Sidaa darteed, gaaska shidaalka hawada laguma sii deyn doono, isaga oo meesha ka saaraya dhibaatooyinka badbaadada qarsoon;
lpg gaaska ogaanshaha, qalabka gaaska, Alaarmiga gaaska gubanaya, gaaska ololi kara, Shiine gaaska baadhe, qalabka gaaska go'an,